UEFA oo soo saartay kooxaha abid ugu fiicnaa qaaradda Yurub!! – Gool FM
UEFA oo soo saartay kooxaha abid ugu fiicnaa qaaradda Yurub!!
Xilliyadii ay ugu fiicnaayeen!
Raage January 15, 2018
(Nyon) 15 Jan 2018 – Xiriirka kubadda cagta Yurub ee UEFA ayaa soo saartay naadiyadii Yurub ugu fiicnaa taariikhda, kuwaasoo ay ka dhex muuqdaan kooxaha waawayn ee qaaradda sida Real Madrid, AC Milan iyo qaar kale.
Kooxaha la qiimeeyay waxaa ka mid ah Galacticos-kii Real Madrid, Il Grande Milan-tii beri Yurub qabsatay ee Arigo Sacchi, Inter-tii Herrera, Barcelona-dii Pep Guardiola, balse waxaan il la saarin Juventus iyo kooxo kale oo liiska ka maqan.
Hoos ka eeg liiska
RASMI: Lisandro Ezequiel Lopez oo ku biiray kooxda Inter Milan + Sawirro & Muuqaal
Chelsea oo diyaar u ah inay Sanchez ka afduubato Manchester United